हरेक आमाबाबुले आफ्नो बच्चाको धेरै राम्रो, राम्रो शिक्षा, ध्वनि ज्ञान, सीप समाजमा आवश्यक दिन चाहनुहुन्छ। छोराछोरीको लागि शैक्षिक कार्टून व्यापक विकास र शिक्षा अभिन्न भाग हो। बच्चाहरु सधैं ठोस सिक्न - हामी यो मन वा छैन कि। आमाबाबुले सबैभन्दा आफ्नो विकास गर्न योगदान हुने ती कार्टून, हेर्न आफ्नो बच्चाहरु टिप्न लागि त्यसैले यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हामीलाई सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प सँगै विचार गरौं।
सुन्दर कार्टून वल्ट डिज्नी द्वारा उत्पादित। जो पछिल्लो शताब्दीको नब्बे मा वृद्धि धेरै मान्छे, सिंह CUB Simba को कहानी शायद सबैभन्दा लामो समय को लागि लोकप्रिय थियो भन्छन्।
यो कार्टून आफ्नो दया र उदारता, अथाह अर्थ जनाए। दार्शनिक तर्क र connotations सारा कहानी मार्फत चल्छ कि, छैन तर जवान बुद्धिजीवियों को मन उतेजित गर्नु सक्नुहुन्छ। बच्चा बस यी संज्ञानात्मक कार्टून आवश्यक छ।5वर्ष - यो प्रश्न र उत्तरहरू को उमेर हो, र यो लक्ष्य दर्शक मा छ र डिजाइन गरिएको छ "सिंह राजा।"
आज छोराछोरी, निश्चित लागि, बारे यो रमाइलो एनिमेटेड श्रृंखला प्रेम हुनेछ कुकुर परिवार। परिवार Barboskinyh हामीलाई नजिकै बस्ने परिवार मान्छे जस्तै धेरै। बुबा आत्म-कार्यरत छ, यो व्यक्तिगत कम्प्युटर पालन गर्न अक्सर सम्भव छ। आमा एक अभिनेत्री वा गायक बन्ने सपना सपना। छोरी लिसा ख्याति बिल्ली Jeanne समान एक क्यारियर को सपना। पाल छोरा साँच्चै फुटबल उठाउँछ र सबै भन्दा राम्रो परिणाम हासिल गर्न आफैलाई तालिम गर्न चाहन्छ। गुलाब - को जेठो केटी कल्पना मा धनी छ र अविश्वसनीय एक सुन्दर हुन चाहन्छन्: त्यो नवीनतम फेसनमा पोशाक गर्न प्रयास, लोकप्रिय पत्रिका मार्फत leafing घण्टा बिताए। जीन - साँचो विद्वान: उहाँले हठी भौतिक को अध्ययन र भविष्यमा संलग्न नोबेल पुरस्कार जित्न चाहन्छ। बच्चा - सबैलाई मनपर्ने। उहाँले अक्सर विभिन्न हास्यास्पद परिस्थिति मा हुन्छ।
तसर्थ, वर्ण प्रत्येक सपना जीवनमा उद्देश्य छ, र यो अद्भुत छ। आज छोराछोरी सबै मुद्दाहरू शान्तिमय तरिकाले समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने यो विचार को एक कार्टून गर्नेछ र यो प्रत्येक अन्य संग बातचीत गर्न सक्षम हुन धेरै महत्त्वपूर्ण छ। बच्चाहरु Barboskinyh सबैलाई रूपमा पनि विनाशकारी नतिजा गर्न सक्छ भनेर संघर्ष छ। बच्चा तिनीहरूलाई हेर्दै हुनेछ र सधैं कूटनीति, जीवन एउटा दार्शनिक मनोवृत्ति सिक्न।
सायद संसारको कुनै व्यक्ति यी अद्भुत वर्ण को अस्तित्व को कहिल्यै सुनेका गर्ने।4वर्ष को लागि संज्ञानात्मक कार्टून एक निश्चित विचार बोक्न र स्पष्टता, समझ संलग्न बच्चा मुद्दाहरू उपलब्धता छ। "Smeshariki" यी आवश्यकताहरू पूर्ण पूरा: अक्षरहरू केही गम्भीर विषयहरू मा, एक सजिलो, बुझ्ने तरिकामा वर्णनकर्ता कुरा। अक्षरहरू प्रत्येक यसको आफ्नै अक्षर छन्: Barash - एक कवि र सपनाहरु देखने, Losyash - अनुसन्धानकर्ताहरूले र वैज्ञानिकहरू Nyusha - पहिलो सौन्दर्य, प्रसिद्धि र प्रशंसकको सपना। कहिलेकाहीं तिनीहरूले गम्भीर बहस र पनि तर्क संग उत्पन्न किनभने आफ्नो व्यक्तित्व वर्ण, अन्त गर्न रक्षा गर्न तयार छन्।
निस्सन्देह, बच्चा एकदम awfully को हीरो राम्रो राउन्ड आकार संग ठाँउ लिएर विकासक्रम पालना रोचक हुनेछ। सुरुमा छ, कि "हास्यास्पद बलमा" को रूपमा अनुवाद "Smeshariki", भनेर मनोरन्जन गर्नु र रम्न गर्न अभिप्रेरित छ। केही गहिरो भित्री अर्थ युक्त, रमाइलो, सजिलो - बच्चाहरु को लागि शैक्षिक कार्टून बस जस्तै हुनुपर्छ। यो connotation बिना कुनै पनि लोकप्रिय कार्टून परियोजना हासिल गर्न असम्भव छ।
"चाची उलनेबुला को पाठ"
यो कार्टून बस हामीलाई वरिपरिको विश्व सिक्दै छन् जो धेरै साना बच्चाहरु उद्देश्य छ।2वर्ष को लागि संज्ञानात्मक कार्टून सधैं विकास केन्द्रित हुनुपर्छ : संज्ञानात्मक गतिविधिको व्यक्तिगत वस्तुहरु, उनको गुण, आकार, रंग, आदि को अध्ययन एक जवान बच्चाको लागि सबैभन्दा रोचक यो कसरी संसारको प्रश्न छ। "चाची उलनेबुला को पाठ" राम्रो बच्चा को जिज्ञासा पूरा हुन सक्छ। यी कक्षाहरूमा, तपाईं प्रकृति, वनस्पति र जीव को घटना अन्वेषण गर्न सक्छ।
यो एक काल्पनिक चरित्र, जो प्रकृति मा अस्तित्व कहिल्यै: यो एक उज्ज्वल गुलाबी रंग, विदेशी समान छ र एक परी कथा मा एक राम्रो-natured बुढिया जस्तो देखिन्छ।
संसारभरि बच्चाहरु Luntik प्रेम गरे - हाम्रो ग्रह पृथ्वी भ्रमण चन्द्र एक रहस्यमय प्राणी आए र अब। छोराछोरीको लागि शैक्षिक कार्टून बिना "Luntik" के गर्न सक्दैन: यस कथामा एउटा साहसिक र रहस्य र अविश्वसनीय रोचक विषय हो।
यो कार्टून अपेक्षाकृत हालै देखा, तर उमेर26 वर्ष देखि बच्चाहरु पहिले नै उहाँलाई प्रेम। हामी एक सानो केटी Dasha, साहसिक प्रेम गर्ने बारेमा कुरा गर्दै छन्। एक क्षण लागि हेरोइन अझै पनि बस्न सक्दैन: यो निरन्तर कुरा र अध्ययन को लागि खोज छ। सबै कुरामा उनको चासो - रचनात्मकता, अनुसन्धान, पनि अनुसन्धान।
बाल, निस्सन्देह, यो रोचक Dasha र उनको मित्र को रोमांचक पालना गर्न हुनेछ।6वर्ष को लागि संज्ञानात्मक कार्टून जिज्ञासा फरक जो बच्चाहरु लागि उपयुक्त। अरू कसले तर आमाबाबुले बच्चा राम्ररी थाह हुन्? बुद्धिमानीपूर्वक कार्टून चयन, आफ्नो बच्चाहरु को इच्छा विचार गर्नुहोस्।
को वृद्धि: यसरी, बच्चाहरु को लागि शैक्षिक कार्टून बच्चाको विकास गर्न ठोस लाभ ल्याउन सक्छ भन्ने सकारात्मक विशेषताहरु को एक नम्बर संज्ञानात्मक क्षमता, तिनीहरूलाई वरिपरि संसारमा रचनात्मक सोच, कल्पना, जिज्ञासा, चासो।
स्पेनी पुतली "Paola Reina" (Paola Reina)
बच्चाहरु कसरी बनाउने
T3 - थाइरोइड हर्मोन: के को लागि जिम्मेवार र आदर्श देखि विचलन को दर
मरुभूमिमा, आँधी र उतेजना को संरक्षक - मिश्री देवता सेत
छोराछोरीको फुटबल क्लब। फुटबल खण्ड। छोराछोरीको फुटबल स्कूल
मासु संग पाक्नु Puff केक
सहायता 4n: त्यो छ, तपाईं को आवश्यकता र कहाँ प्राप्त गर्न के?
Multivarka "रेडमन्ड" मा चार्लोट - उत्पादनहरु को एक असामान्य संयोजन
Kremlin - यो एक शहरी भवन छ। शब्द को अर्थ "Kremlin"